मुख्य खबर | गृहपृष्ठ | Page 2
असार ३०, काठमाडौं (अस) । आइतवार सामान्य अंकले वृद्धि भएको शेयर बजार सोमवार ५ दशमलव शून्य ८ अंक बढेर १ हजार २५४...
असार ३०, काठमाडौं (अस) । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक...
काठमाडौं । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको समयावधि थपिएको छ । विमानस्थल निर्माणको केह...
विराटनगर (अस) । अविरल वर्षाका कारण मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका ९० प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन् । वर्षाको पा...
पर्यटनबाट १ वर्षमा ७० अर्ब आम्दानी
टीपी भुसाल काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले सन् २०१८ मा रू. ६९ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख आम्दानी गरेको छ । यो सन...
विजय दमासे काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को अन्तिम सातामा रू. २९ अर्ब ६८ करोड विका...
चीनसँग हवाई सम्झौता पुनरवलोकन : निर्माणाधीन विमानस्थलबाट उडान नेपालको प्राथमिकता
अभियान संवाददाता काठमाडौं । आगामी साउन ९ र १० मा पेचिङमा नेपाल र चीनबीच हुने हवाई सेवा सम्झौताको पुनरवलोकन वार...
on: July 14, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
असार २९, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ९५ अंक बढेर १ हजार २४९ दशमलव ४९ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार २४८ दशमलव ७२ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक ४९ मिनेटमा...	बिस्तृतमा
‘सीटीडी’मा कोलकाता पोर्टको अवरोध : आयातकर्ताले अपनाए वैकल्पिक उपाय
on: July 14, 2019 मुख्य खबर, समाचार
वीरगञ्ज । तेस्रो मुलकबाट भारतको कोलकातामा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लरेशन (सीटीडी) प्रक्रियामा नेपालका लागि आउने कण्टेनर ढुवानीमा कोलकाता पोर्ट ट्रष्टले अवरोध गरेको छ । पोर्टले सीटीडीमा आएका कण्टे...	बिस्तृतमा
बजेट पेश नगर्ने ७८ स्थानीय तहको खर्च ‘असंवैधानिक’ : कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिँदै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७८ ओटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याएका छैनन् । असार १० गते गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेश गरी असारभित्रै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । बजेट न...	बिस्तृतमा
वर्षा र बाढीले देशभर विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध
काठमाडौं (अस) । लगातारको वर्षा र बाढीका कारण शनिवार देशभरको विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ । पोल ढल्ने, ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्नेजस्ता कारणले प्रणालीमा अवरोध आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण...	बिस्तृतमा
on: July 13, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
तीन कम्पनीको चार करोड सिमकार्ड विक्री : सक्रिय प्रयोगकर्ताको छैन तथ्यांक
on: July 12, 2019 मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख महीनासम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले करीब ४ करोडओटा सिमकार्ड विक्री गरेका छन् । तीन ठूला मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले कुल जन...	बिस्तृतमा
काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ९ महीनामा झन्डै रू. ३५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । २०७५ असोजमा शुरू भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ मसान्तसम्म ‘क’, ‘...	बिस्तृतमा
नीति नबन्दा रोकियो सौर्य ऊर्जाको पीपीए
काठमाडौं । सौर्य ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रको आकर्षण बढिरहेका बेला नीतिगत अस्पष्टताका कारण त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४’ मा उ...	बिस्तृतमा